Wikipedia:အကူအညီစားပွဲ/မြန်မာစာအကူအညီ - ဝီကီပီးဒီးယား
< Wikipedia:အကူအညီစားပွဲ(Wikipedia:MMHELP မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤစာမျက်နှာသည် ဝီကီပီးဒီးယား မြန်မာစာ အခက်အခဲ နှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများသာလျှင် မေးရန် ဖြစ်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယား အသုံးပြုခြင်း သို့ တည်းဖြတ်ခြင်း မေးခွန်းများအတွက် အကူအညီစားပွဲ တွင် မေးမြန်းပါ။
မေးခွန်းများ မမေးမြန်းမီ Wikipedia:Font, Wikipedia:Myanmarsar Help တို့ကို ဖတ်ရှုပေးပါ။ မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ စာပြန်ကြားရာတွင် အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ရှည်ပါ။ သင့်မေးခွန်းအား ဖြေကြားထားခြင်းကို သိရှိနိုင်ရန် ဤစာမျက်နှာသို့ နောက်တစ်ဖန် လာရောက်ပေးပါ။
ဝီကီပီးဒီးယား မြန်မာစာအခက်အခဲအတွက် မေးခွန်းအသစ် မေးမြန်းရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ »
တမ်းပလိတ်:Wikipedia help pages
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ ရှာဖွေရန်
မြန်မာစာအကူအညီစားပွဲ မော်ကွန်းမှတ်တမ်းဟောင်းများတွင် ရှာဖွေရန်
၁ windows 10 မှာ မြန်မာစာရိုက်၍ ရအောင် အကူအညီတောင်းခြင်း
၂ ျမန္﻿မာစာ ဖတ္﻿မရလို႔ပါခင္﻿ဗ်ာ
၃ Font problem
၅ myanmar font inpudအဆင္မေျပ
၈ ျမန္မာစာ မမွန္ ။အမွန္ ျပင္ရန္
၉ ျမန္မာစာ မမွန္ ။အမွန္ ျပင္ရန္
၁၂ ဖုန္း gmail apk တြင္ျမန္မာစာမမွန္ျခင္း
၁၉ ရ၊ယ သုံးသည့်နေရာမှန်သိရန်။
၂၁ Thet Ei mon
button 0018 definitely Myanmr(unicode) စတင်အသုံးပြုသူတွေအတွက် google မှ ဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျ ဓာတ်ပုံလို့ရိုက်တာမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်
windows 10 မှာ မြန်မာစာရိုက်၍ ရအောင် အကူအညီတောင်းခြင်းပြင်ဆင်
ျ ကျွန်တော် အရင်က ubuntu os သုံးပြီး ဝီကီရေးတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အခု windows 10 ပြောင်းသုံးတာ စာရိုက်ရတာ အဆင်မပြေပါ။ အရင်က windows7မှာ keyman နဲ့တွဲသုံးပြီး Myanmar3ဖောင့်နဲ့ စာတွေရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ windows 10 စသုံးတာ firefox setting မှာ font တွေကို myanmar3ပြောင်းထားပါတယ်။ ဝီကီက စာတွေအမှန်အတိုင်းလဲ မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် keyboard မှာ မြန်မာစာ ရွေးထားပေမယ့် စာရိုက်ရင် myanmar3လက်ကွက်လို မပေါ်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ shift +fနှိပ်ရင်္္ ပေါ်ရမယ့်အစား်် ပေါ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကူညီပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၅:၀၁၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၇ (UTC)
ဝင်းဒိုးမှာ နဂိုပါတဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ကို သုံးတာလား။ ဒါမှမဟုတ် third party ကီးဘုတ်တင်ပြီး သုံးနေတာလား။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၀၄၊ ၃၀ မတ် ၂၀၁၇ (UTC)
နဂိုပါတဲ့ဟာ သုံးတာပါ။ third party app တွေသုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်ဟာသုံးလို့ရမလဲ
ယူနီကုတ္﻿﻿နဲ႔ ဖတ္﻿﻿မရလို႔ ရ﻿﻿ေအာင္﻿﻿ဘယ္﻿﻿လို﻿﻿ေျပာင္﻿﻿းလဲ သိခ်င္﻿﻿ပါတယ္﻿﻿ခင္﻿﻿ဗ်ာ ﻿ေဇာ္﻿ဂ်ီ ﻿﻿ေဖာင္﻿﻿့လည္﻿﻿းရွာမ﻿﻿ေတြ႕လို႔ပါခင္﻿﻿ဗ်ာ-- 37.111.3.25 ၀၉:၄၈၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
You need to use Unicode font to read and write in Myanmar Wikipedia. To know more detail, feel free to message me. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၂၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
Google translate မွာ ဖတ္​လို႔ရတဲ့ ဗမာစာ​ေပၚမယ္​့ font download link readymade ​ေလး ပို႔​ေပးပါ
You all need to use Unicode system to read and write in Myanmar Wikipedia. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၂၂၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Page cannot be read in Myanmar font — Preceding unsigned comment added by ‎37.111.4.67 (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး)
You need to use Unicode font to read and write in Myanmar Wikipedia. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၁၀၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
== ျမန္မာစားမမွန္လို႔ပါအကိုတို႔ကူညီေပးပါဦးအကိုတို႔မတို႔ ==အကူ
ေက်းဇူတင္ပါတယ္ — Preceding unsigned comment added by ‎Zawgyi(Myanmar) (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး)
Zawgyi font is not used in Myanmar Wikipedia. You need to use Myanmar Unicode to read and write on Myanmar Wikipedia. Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၄၀၊ ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
== zawgyi codeႏွင့္ျပသေပးႏိုင္ပါရန္ ==
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ Unicode သုံးရန္အခက္အခဲရိွပါသျဖင့္ zawgyi code ႏွင့္ျပသေပးေစလိုပါတယ္ <!း Preceding unsigned comment added by Luungelay (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး)
If we use Zawgyi font, there will be some technical problems in processing, searching, linking etc. For more information please see Wikipedia:Font. Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၁၅၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
ကခဂဃငစဆ — 37.111.7.13 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 11:21,5July 2018
myanmar font inpudအဆင္မေျပပြင်ဆင်
Myanmarfont အဆင္မေျပဘူးျဖစ္ေနလ္ု႕ပါ — 103.85.107.58 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 03:57,6August 2018
ကို — 103.85.106.12 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 05:40,9August 2018
ျမန္မာစာမမွန္ဘူး — 45.112.177.70 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 13:37, 28 August 2018
Please try to use with Desktop mode via browser. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၇၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)
ျမန္မာစာ မမွန္ ။အမွန္ ျပင္ရန္ပြင်ဆင်
ျမန္မာစာ မမွန္။ အမွန္ ျပင္ရန္။ — 65.18.125.157 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 14:54, 12 December 2018
ျမန္မာအအ့အအ စာ မမွန္။ အမွန္ ျပင္ရန္။ — 65.18.125.157 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 15:44, 12 December 2018
အဣ၏အုေအ — 103.52.14.59 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 03:05, 25 December 2018
အေသးစားအိမ္တြင္းစီးပြားေရး — Ashinpyinnyeinda (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 07:11, 27 February 2019
ဖုန္း gmail apk တြင္ျမန္မာစာမမွန္ျခင္းပြင်ဆင်
ဖုန္း gmail apk တြင္ျမန္မာစာမွန္၍ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း — 65.18.120.191 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 13:58, 1 June 2019
Myanmar — 37.111.0.107 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 19:38, 15 June 2019
စကထဲက ဘာမွကိုနားမလည္ခဲ့ပါဘူးေလ်ွာက္နွိပ္ရင္း သည္စာေရးတဲ့ေနရာေရာက္လာတာ ခုလိုေရးတဲ့စာနဲ့ဆို ခုတင္ျပေနတာေတြကိုစိတ္ဝင္စားမိမွာပါ စာတစ္ခုကိုနားလည္မွ တုန့္ျပန္ေျပာနိုင္မွာမို့ ဦးစြာနားလည္ရန္အေရးျကီးပါသည္ သို့ မဟုတ္ပါက အဓိပၸါ္ယ္ရွိမည္မဟုတ္ပါ က်ြန္ုပ္နားလည္ေသာဤစာျဖင့္သင္တို့ေရးမည္ဆိုပါက က်ြန္ုပ္ ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါမည္ ဒါပါဘဲ — 2400:AC40:826:9023:7021:608D:CAEF:B8C1 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 15:42, 29 June 2019
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားက ယူနီကုဒ်စနစ်ကို သုံးထားတဲ့အတွက် ယူနီကုဒ်ဖောင့်မဟုတ်တာကို သုံးမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ ယူနီကုဒ်သုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၀၁၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
အကူညီေပးပါ — 37.111.3.154 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 14:05, 10 September 2019
ယူနီကုဒ်ပြောင်းပြီး သုံးကြည့်ပေးပါဗျ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၉၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
အထက်ပါစာသားများကိုအမှန်ဖတ်မရပါ — 65.18.115.106 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 05:29, 12 September 2019
အခု ရေးထားတာတော့ ယူနီကုဒ်အတိုင်း မှန်နေပါတယ်ဗျ။ အပေါ်က ပြောထားတာတွေက ဇော်ဂျီနဲ့ အကူအညီတောင်းနေကြတာမို့ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၉၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
ကျွန်တော် အသင်္ခတ လုလင်ပျိုသည် ပုံတင်၍မရပါ စာများရေသားလျှင်လည်း အခြားသူများရေးပြီးသားနေရာ၌သာ ဖြည့်စွက်ရေးသလို ရေးနေရပါသည် ။ မိမိကိုင်ပိုင် စာမျက်နှာ။ ဖန်တီချင်ပါသည် ကူညီပေးပါဦး ဝီ လူကြီးများခင်ဗျ
ပုံတင်ခွင့် ရဖို့ ရက်တချို့ စောင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ Autoconfirmed User အုပ်စုထဲ ဝင်နေ၊ မနေ ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။
အကြောင်းအရာသစ် ရေးချင်ရင် Search ဝီကီပီးဒီးယား မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ မရှိသေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆို Search list ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အနီရောင်နဲ့ link ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ Htoo Ra Aung (ဆွေးနွေး) ၀၇:၁၅၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
ူနီကုတ္ဘာေတြျဖစ္ကုန္မွန္းမသိေတာ့ပါ ယ — 117.18.230.163 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 16:58, 25 September 2019
ဝီကီပီးဒီးယားမှနေ ကမ်ဘာ့သတင်းများကို မည်သို့ကြည့်ရှု့ရမည်နည်း — 2400:AC40:82B:53CB:9EE3:D43:FABD:25DB (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 13:48, 29 September 2019
ရ၊ယ နှင့်ပတ်သက်၍မေးလိုပါသည်။ "သွားရင်း၊လာရင်း" "အရင်တုန်းက" "ပြောရင်ပြောပါ" "အရင်ဆုံး" "ရကောက်" သုံးခဲ့သည်များ မှန်ပါသလား? ရကောက်နေရာတွင် "ယပလက်"ဖြင့်သုံးလို့ရပါသလား? — 103.80.37.2 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 21:28, 29 September 2019
ရကောက်နဲ့က မှန်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံများကို https://my.wiktionary.org မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၁၇၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
စာဖတ်၍မရပါ — Aung Kyaw Soe mlm (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 08:37, 1 October 2019
အသုံးပြုတဲ့ စက်မှာ ယူနီကုဒ် ရှိနေမှ ဖတ်ရှုရ လွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းဖို့ အခက်အခဲရှိနေရင် စာမျက်နှာအောက်ဆုံးနားက "စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ" သို့မဟုတ် "Desktop mode" ကို နှိပ်ပြီး ပြောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၅၂၊ ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Thet Ei monပြင်ဆင်
သက်အိမွန် — 117.18.231.30 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 14:40,4October 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:အကူအညီစားပွဲ/မြန်မာစာအကူအညီ&oldid=496685" မှ ရယူရန်
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။